« Can 2017 » : nobatain’i Kameronina fanindiminy ny amboara | NewsMada
« Can 2017 » : nobatain’i Kameronina fanindiminy ny amboara
Afa-bela. Voahosotra ho tompondakan’i Afrika fanindiminy ny Liona tsy voafolaka Kameroney, taorian’ny lalao famaranana ny Can natao tany Gabon, omaly. Resin’izy ireo ny tompondaka impito, ny Faraonan’i Ejypta.
Nitarika ny isa 1 no 0 ny ejypsianina teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, minitra faha-21 tamin’ny alalan’i Elneny rehefa nahazo tolotra tsara avy amin’i Salah ka nampikobana ny haraton’i Ondoa. Efa nialohavan’ny fanafihana totoafo izany hatramin’ ny fanombohan’ny lalao. Taitra ny Kameroney teo amin’ny fizaram-potoana faharoa ka nifehy ny famezivezena baolina. Nahitam-bokany izany taty amin’ny minitra faha-59 tamin’ny alalan’ny baolina nampidirin’i Nkoulou, tamin’ny lohany. Sahirana ny Faraona nanoloana izany ary nianona amin’ny valim-panafihana, notarihin’ilay mpilalaon’ny AS Roma, Salah, saingy tsy nahitam-bokany. Efa nihevitra ny hiroso amin’ny fanalavam-potoana sy ny hanaovana ny « tir au but » ny ejypsianina noho ny fahatokisany ny traikefan’ny mpiandro haratony, El-Hadary. Hita taratra tamin’ny endri-dalao nataon’izy ireo izany. Tsy araka ny niheveran’izy ireo azy anefa ny niseho satria nampian’i Aboubakar izany isa izany teo amin’ny minitra faha-88 ka nitondra ny Liona tsy voabaiko any amin’ny maha tompondakan’i Afrika azy tamin’ity indray mandeha ity. Nitolefika tanteraka ny Faraona.
Hatao any Kameronina ny Can 2019
Amin’ny ankapobeny, nifandanja ny lalao. Hita ihany anefa ny tsy fahamatoran’ny mpilalao sasany ho an’ny Kameroney amin’ny fandakana baolina lavitra satria very an-javony lasa ambony be loatra izany na mivilana. Na izany aza, tombanan’ny maro fa anisan’ireo ekipa hanana ny toerany na aty Afrika na eo amin’ny hiakarana amin’ny « Mondial 2018 » ny ekipa roa tonta. Tanora avokoa ny ankamaroan’ireo mpilalao.
Tsiahivina efa nahazo ny Can ny taona 1984, 1988, 2000, 2002 ny Kameroney ary izao indray vao nibata izany. Efa tojo teo amin’ny famaranana koa izy ireo ny taona 2008, saingy resin’ny Faraona tamin’izany. Tanteraka izany izao ny valin’adin’ny Liona tsy voafolaka. Nikatona indray izany aloha iny ny ridaon’ny “Can 2017”. Horaisin’i Kameronina nahazo izany tamin’ity ny Can andiany faha-32 amin’ny taona 2019.